Squeeze sikaKing Kong Azisekho: UBrie Larson's Spunky 'Kong: Skull Island' Heroine | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Squeeze yaseKing Kong Azisekho: UBrie Larson's Spunky 'Kong: Skull Island' Heroine
Squeeze yaseKing Kong Azisekho: UBrie Larson's Spunky 'Kong: Skull Island' Heroine
UBrie Larson ungene Kong: Isiqithi soKhakhayi .IWarner Bros.
Inokuba linyathelo elinye losana kwiinkawu ezinje ngeKing Kong, okanye ukutsiba phambili kwiiflip ze-baseball-enxibe i-Hollywood mogul, kodwa owasetyhini ekhokelela Kong: Isiqithi soKhakhayi akukho mntu ulixhoba, umntu otyhafileyo uFay Wray. Kwi I-2017 yokuqala ye-blockbuster yesenzo (Uqikelelo lohlahlo-lwabiwo mali oluyi- $ 185M), ophumelele u-Oscar uBrie Larson, oneminyaka engama-27, udlala intatheli yomntu onesibindi uMason Weaver Ngokwesiko likaKaren Allen omkhulu ovela Abahlaseli beTyeya elahlekileyo, Uyathandeka ngokuqaqambileyo kodwa akangomntu - okanye irhamncwa - irabha yeducky yokudlala.
U-Weaver uluhlobo lwe-hip yokuqala yama-70s intshontsho eyayiza kuthi xhaxhe kuGrace Slick okanye kuJanis Joplin ngaphambi kokuba abuyele kuye ngenxa yokulila kwakhe kuJoni Mitchell's 'Blue.' Uyi-peacenik kwindawo yemfazwe, ikhamera ibotshelelwe entanyeni yakhe, uhlambe -nxibe iinwele ezimhlophe kunye nobukhulu bamehlo evolontiya le-Peace Corps kusuku lwakhe lokuqala eGhana. Nangona kunjalo u-Weaver wayeza kukhuliswa ngokwaneleyo ukuba angayi kwiBogart. Uvelisa ubushushu ngaphandle kwezoluli zeenwele okanye izithende eziphakamileyo kwaye, phantse kuwo onke amabhinqa athe tye kubaphulaphuli, uyaqonda ukuba, ngaphandle kwezopolitiko zakhe zobumpimpi, u-hunky Tom Hiddleston kaJames Conrad ( Intliziyo yobumnyama I-pun eyenzelweyo) lelona themba lishushu kwimishini yokutyhila iimfihlelo zeSkull Island.
Owayesakuba ngumlingiswa we-indie othandekayo uLarson (okwangoku udlala indima kaKapteni Marvel Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo ) akunyanzelekanga ukuba azibophe ngamaqhina kule ndima. Ungumculi okrelekrele, onomdla odlala ubukrelekrele, umzobi onomdla - i-bruti cutie kwilizwe elilawulwa yindoda. Ngokungafaniyo neempawu zangaphambili, akabanjwanga Igumbi , umama ophethwe gadalala ekhusela unyana wakhe omncinci, enqulwa nangona ebeyimveliso yokudlwengulwa. Kwaye ayinguye nomcebisi okhathaleleyo wolutsha olunengxaki kwidrama yakhe yokuqhekeka Ixesha elifutshane 12 . Kuyavunywa, uMason Weaver usengumxube, uswele i-backstory okanye iimpazamo ezibonakalayo. Uyavela, njengoVenus, efika ebunjwe ngokupheleleyo kwisiqingatha seqokobhe elinengalo ye-spunk kunye neYankee.
Kuqhakamshelwano olubalulekileyo lwamehlo phakathi komfazi kunye nesilo, u-Weaver umi eweni ngaphandle kweConrad, ejongene ne-Kong enkulu, ummangaliso wobuchule be-CGI yangoku. Ngalo mzuzu, ikhamera yakhe iyatyhafa entanyeni, unovelwano njengoJane Goodall, ephefumlela nzulu ebusweni komnye weyona sinema idumileyo. Kodwa i-Weaver ayisiyontombazana eqhelekileyo ekubandezelekeni komfanekiso weefilimu zakuqala zaseKong. Akangonodoli weBarbie obiweyo ophilisa ingqumbo yabakhuseli bakhe abangabantu kwinto engumbindi wendoda xa kuthelekiswa nebali lezilwanyana.
Okanye, njengoko umlinganiswa womlawuli wefilimu uCarl Denham esitsho kwindoda yakhe ekhokelayo uJohn Driscoll kwiklasi ye-1933 uking Kong : Irhamncwa yayingumntu onzima nalo. Angakhotha umhlaba. Kodwa wathi akubona uBuhle, wamfumana. Wahamba ethambile. Wabulibala ubulumko bakhe kwaye ii-fallas ezincinci zamkhotha.
Kwaye emva koko kwenzeka into emnandi [[isilumkisi esonakalisayo]]: Ubuhle bukaWeaver abukhuthazi uKong ukuba athandane naye nangayiphi na indlela yothando. Umnqweno wesini ogqwethekileyo (kunye nongaphindaphindwanga) phakathi kwezilwanyana kunye nentombazana awuzange uqhubeke (ukhumbula uhlaziyo lukaPeter Jackson luka-2005). I-Kong ayimthwali u-Weaver ayise encotsheni yeentaba okanye ayikrwithe ngaphandle i-Empire State Building, umfazi obetha umfazi wakhe wakrazula kunye ne-bra evezwe, eqala loo fantasy yohlangulo lwamadoda efakwe kwi-Kong yasekuqaleni. Ukugxothwa yinkanuko yesilo engaqhelekanga exhasa eyokuqala: ukuba thina singamagorha angamadoda kufuneka sibonise ubudoda bethu sisindisa umfazi omhlophe kwinyani eyoyikekayo-efanayo nogonyamelo olugwetyelweyo loloyiko Lokudlwengula abasetyhini bethu abangenakuzinceda.
Ndifumene ukungabikho kwe-sci-fi stalking -Kong on Blonde-isiqabu esikhulu. Bendingazi, ndihleli phantsi ekuqaleni kwale bhanyabhanya inkulu, ukuba bendisoyika kangakanani ukudibana kwezilwanyana kunye nobuhle. Ayenzi loo nto Kong: Isiqithi soKhakhayi Ifilimu yokugqibela yabasetyhini, hayi ukuba yayiyinjongo yale prequel yoyikekayo ekhokelwa nguJordani Vogt-Roberts kwaye yabhalwa liqela lamadoda.
Kong: Isiqithi soKhakhayi 'Isikhokelo sabasetyhini sihlala siphila ngokungaqhelekanga kwindawo enkulu yamadoda. Nokuba ujongene neKong, okanye ubaleka ecaleni kukaConrad ngeboneyard etshayayo ebalekiswa ngamacikilishe aqwengayo, uLarson's Weaver uhlala kwindawo encinci kakhulu yabalinganiswa ababhinqileyo abaneenxalenye zokuthetha. Kumdlalo owandileyo olawulwa ngamadoda oquka uSamuel L. Jackson, uJohn C. Reilly John Goodman noRichard Jenkins, umfoti wemfazwe wayengafane asebenzisane nabanye abantu basetyhini kubandakanya nososayensi ongumfazi (Tian Jing).
I-Weaver ikakhulu sisiqithi esikumjelo wamadoda: eCaucasus, eAsia nase-Afrika naseMelika; abadala nabancinci; yemveli kunye interloper; I-lucid kwaye ayinamakhonkco. Kungaphikiswa ukuba, njengomntu wangaphandle, eneneni unezinto ezifanayo ne-loner Kong kunokuba esenza namaqabane akhe angamadoda. Oko akukwenzi ukuba umdlalo owanelisayo. Njengomfazi, oko kulandelelana ngokulandelelana kweCGI andifuni nokuyibona.
'Umniki-mpahla' uyimfeketho, ukungenisa impahla ngobuncinci e-Australia
I-China ibuyisa iiPandas ezinkulu ezivela eSan Diego Zoo phakathi kweMfazwe yoRhwebo
Iindaba zeFox News zityholwa ngokuhlawulela ukuba ne-cyber yabasebenzi yahlaselwa
‘Umbambisi Ubeyintlola’ uswela imincili-kodwa uPaul Rudd udlala eyona Ndima iphambili yomsebenzi wakhe
Amaxabiso efaskoti eblue kwisidlo ngasinye
uninzi lwe-Netflix ebukelweyo ibonisa i-2020
umthetho nomyalelo svu rap embi
UStephanie malick arhente yekhuselo
yeyiphi eyona ndlela yokuthandana ilungileyo